न पढाइ, न व्यवसाय | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
सुरुमा एक हप्ता लकडाउन हुने समाचार सुनेपछि ‘राम्रै भो गाउँ नगएको पनि धेरै भएको थियो । यो बन्दमा गाउँ जान्छु’ भन्ने भयो । अनि धादिङ आएँ । तर एक हप्ता होइन दुई हप्ता होइन १०४ दिन भयो म गाउँ आएको ।
मेरो गाउँ धादिङको सुनखानी भन्ने ठाउँमा पर्छ।
म विधार्थी हुँ । सँगसँगै स्टार ह्युमन रिसोर्स प्राइभेट लिमिटेड नामक कम्पनी चलाउँछु जसले घर, कोठा, जागिर आदि खोज्ने काम गर्छ । दुई जनाको साझेदारी हामीले ३ वर्ष अगाडि यो कम्पनी खोलेका थियौं । लगानी लगभग १० लाख लागेको थियो । लगानी त गरियो तर गर्नुपर्ने काम र तरिका बुझ्नै लगभग एक वर्ष लाग्यो मलाई । त्यसपछि कमाइ राम्रै हुँदै थियो, नेटवर्क पनि बढ्दै गएकोले अब चाहिँ राम्रो हुन्छ कि भन्ने आश लागेको थियो तर आज चार महिना हुन आँटिसक्यो लकडाउन सकिने छाटकाट छैन । बडो तनाव भएको छ ।
भर्खरै मात्र स्नातकोत्तरमा भर्ना भएको थिएँ । दुई हप्ता पनि कलेज जान पाइन लकडाउन भइहाल्यो । धेरैजसो साथीहरु अनलाइन क्लास लिइरहेका रहेछन् तर मैले क्लास लिन सकेको छैन किनकि हाम्रो गाउँमा वाइफाइ सुविधा छैन । मोबाइल डाटा पनि राम्रो चल्दैन। मलाई कलेजले फोन गरेको थियो । क्लास भइरहेको जानकारी दिएको थियो तर मैले म क्लास लिन सक्ने अवस्थामा छैन भनिदिएँ । मुख्य कुरा त मैले किताब किनेको छैन र डाटा पनि चल्दैन । मलाई ३ दिनअघि मात्र पनि कलेजको प्रिन्सिपलले फोन गरेर क्लास जसरी पनि लिनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले परीक्षा पनि हुन्छ भन्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा पीरिक्षाको तयारी गरेको छैन । पहिलो सेमेस्टरको परीक्षा हुन सक्ने कुराले आजभोलि नचाहिँदो तनाव थपिएको छ ।
पढाइको चिन्तासँगै कामको चिन्ता पनि छ । बल्लबल्ल सुरु गरेको व्यवसाय अहिले पूरै डावाँडोल छ। काठमाडौं छोडेर गएपछि एक पटक पनि अफिस पुग्न सकेको छैन । हुन त अहिले सबै जना घरमै छन् । तर पनि मनमा कामै नभए पनि अफिसमा गएर बस्न मात्र पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने। महिनाको २२ हजार घर भाडा तिर्न पर्छ । अहिले चार महिना हुन लागिसकेको छ । घरबेटीले भाडा देऊ भनिसकेका छन् । तीस हजार दिइसकेको छु । बाँकी कसरी दिने भनेर जिल्ल परेको छु। कतै सरसापट गरौँ भने पनि हाम्रो बिजनेसको अब भर छैन जस्तो लाग्छ । अब आर्थिक संकट हुने भन्ने हल्ला छ । जागिर हुनेहरुलाई धमाधम जागिरबाट निकालिदैछ भन्ने सुनेको छु । यस्तो बेलामा नयाँ काम कसरी पाउनु ।
कसैले किन्ने भए पनि बेच्न हुन्थ्यो कम्पनी । तर को आउँछ र यस्तो बेलामा ? गुडविल भ्याल्यु ठूलो छैन । अफिसका सामान कसले किन्ला र ? कसैले किनिहाले पनि पनि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर मात्र हो । त्यत्रो लगानी गरेर सुरु गरेको व्यवसाय । अब कौडीको भाउमा सामान मात्र बेच्न मनले मानेको नै छैन ।
यसै गरी घरमै बसेर जिन्दगी कसैको चल्दैन। सरकारले पनि काम नगरेको देख्दा दिक्क लाग्छ । मुख्यमुख्य ठाउँमा भटाभट टेस्ट गरेर कोरोना कम देखिएका ठाउँलाई चैं खोले हुने । न टेस्ट धेरै भाको खबर छ न त नियन्त्रण भाको नै । सरकारलाई ढुक्क छ ।
दु:खका बेलामा पनि नेतालाई जनताभन्दा कुर्सी प्यारो हुने रहेछ । सरकारले लकडाउनबाहेक के नै पो गर्यो, के कसरी राहत दिने अथवा नागरिकको दु:ख कसरी घटाउने भन्नेतिर खास केही गरेको छैन । लकडाउन भनेको कोरोनासँग लड्नलाई तयारी गर्ने समय हो । तर १०४ दिनसम्म के तयारी गर्यो त सरकारले । हामीलाई घरमा थुनेर राख्ने काम मात्रै त गर्‍यो । बिस्तारै अब मान्छे घरबाट निस्किन थालिसकेका छन् । कोरोना नराम्रो तरिकाले फैलन्छ जस्तो लाग्छ घरीघरी । जनताले सरकारका कुरा सुन्दैनन् र कोरोनाले पनि कसैको पुकार सुन्दैन । बेसार पानीले धान्दैन । यो पक्का हो।
अरूभन्दा पनि आफ्नै चिन्ता लाग्छ मलाई । आफ्नो भविष्यको चिन्ता । कहिलेकाहीँ हाम्रो दुई-तीन वर्ष यसरी नै जान्छ जस्तो लाग्छ । के के न गरौंला भनेर सपना देखेको थिएँ । सपना पूरा गर्न कोरोनाले दिंदैन जस्तो छ । अब सामान्य हुँदा पनि अवस्था कस्तो हुने हो थाहा छैन । अवसर ल्याउने हो कि झन् झन् गाह्रो हुने हो ।
सुरु सुरुमा कोरोनाको पहिलो, दोस्रो केस सुन्दा ओहो कत्रो डर लाग्थ्यो ! कसैलाई छोइएला कि भनेर तर्की तर्की हिंडियो । अहिले केको साबुन पानी, केको स्यानिटाइजर, केकी मास्क, केको सामाजिक दूरी हाम्रा मान्छेलाई । एउटा कुरा मैले नबुझेको दश-बीसवटा केस हुँदा पसल पसलमा निगरानी गर्ने, मान्छेबीचको दूरी बढाउन लगाउने, अहिले सोह्र-सत्र हजार केस हुँदा चैं मतलब नगर्ने के हो यस्तो ? म छक्क पर्छु यस्तो ताल देखेर आजकल ।
यति मात्र कहाँ हो र राहतको कुरा पनि अचम्म लाग्छ । लकडाउन गरेको पाँच-सात दिनमै राहत दिन हतार भयो । त्यति बेला मान्छेले अलि अलि भए नि टार्न सक्थे । चाहिने नचाहिने सबैलाई दिए राहत । आइफोन बोक्नेदेखि सुनको सिक्री लगाउने समेतले राहत लिएको सुनियो । राहत त अहिले पो चाहिएको छ मान्छेलाई । तर अहिले राहतको कुरा कतै सुनिदैन ।
दु:ख लाग्छ दुई दिनको जिन्दगी भन्छन् चार महिना त लकडाउनले नै लगिसक्यो उफ् !